Satellites nke Venus: ihe omuma, ihe omuma na ihe omimi | Netwọk Mgbasa Ozi
Satellites nke venus
El ụwa venus ọ bụ otu n’ime mbara ala ndị na-enweghị Satellites eke. Ọ bụ mbara ụwa nke abụọ site na anyanwụ na mbara igwe anyị ma nwee ike ịhụ site na mbara ụwa anyị dị ka ihe na-enwu gbaa. A maara ya dị ka mbara ala nke kpakpando ụtụtụ ebe ọ pụtara dịka ọdịda anyanwụ. A na-etinye ya na ọnọdụ ọdịda anyanwụ ịpụta. E nwere ụfọdụ egwuregwu egwuregwu anyị na-ahụ enweghị satellites na ọ bụ ya mere anyị ga-eji kwuo maka Satellites nke venus.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara Satellites nke Venus na nzuzo ha.
1 Njirimara nke ụwa Venus
2 Fọdụ ịmata ihe
3 Satellites nke venus
4 Echiche banyere Satellites nke Venus
Njirimara nke ụwa Venus
Nke mbụ bụ ịmara ụfọdụ njirimara nke ụwa a tupu ịmara ihe omimi ndị gbara eziokwu ahụ gburugburu na anyị hụrụ na ọ nweghị satellites. Kemgbe oge ochie, a na-akpọ ụwa a Hesperus mgbe elere ya anya. O nwekwara aha ọzọ ma bụrụkwa Lucifer mgbe a hụrụ ya site na chi ọbụbọ. Anyị maara na Venus Enweghị ike ịhụ ya karịa awa 3 tupu ọwụwa anyanwụ ma ọ bụ awa atọ mgbe anyanwụ dasịrị. Ndị ọkà mmụta mbara igwe nke mbụ malitere ịmụ banyere Venus chere na eziokwu ahụ bụ na ha bụ abụọ dị iche iche nke eluigwe nwere ike ịbụ eziokwu.
Planetwa a nwere usoro dị iche iche dịka ọnwa ma ọ bụrụ na ejiri teliskop hụ ya. Oge ọ bụla Venus mezuru njem ya ruo na nke kachasị elu, enwere ike ịhụ ya na obere nha ebe ha bụ akụkụ kachasị anya site na anyanwụ. Kama nke ahụ, ọ bụ ezie na ọ dị ka ọ bụghị ihe ezi uche dị na ya, ogo kachasị nke mbara ala a a na-eru ya mgbe ọ nọ n’omume na-eto eto.
Ihe dịka ihe na - eme na ọnwa na - eme na Venus. A na-emeghachi usoro ya na ọnọdụ ya na oge nke ihe dịka afọ 1.6. Ndị na-agụ kpakpando na-akpọ ụwa a ụwa mbara ụwa. Ma ọ bụ ụwa yiri ya na nha, oke, njupụta na olu. Ndị ọkà mmụta sayensị na-eche na ọ bụ na Venus bụ otu ụzọ dị anya site na anyanwụ nke ụwa anyị nwere ike iburu ndụ. Ma, ebe ọ nọ n'akụkụ ọzọ nke mbara igwe, ọ ghọọla ụwa nke nwere ọnọdụ dị iche na nke anyị.
Otu n’ime njirimara ndị o nwere bụ na o nweghi oke osimiri ọ nweghị satellites kwa. Satellites ga-enwerịrị echiche ụfọdụ nke anyị ga-ahụ n'okpuru. Oke ikuku di egwu gbara ya gburugburu nke nwere ihe mejuputara karbon dioxide ma ya mere na apughi vapo. Igwe ojii na-ese n'elu mmiri nke nwere ike ịhụ telescopes dị ike karị bụ sọlfọ sulphuric. N'adịghị ka ihe na-eme ụwa anyị a, anyị na-ahụ nrụgide nke ikuku dị 92 ugboro karịa. Nke a pụtara na mmadụ ọbụla enweghị ike ịlanarị na mbara ụwa otu nkeji.
Otu ihe mmasi na-emetụta mbara ala a bụ na a maara ya dịka ụwa na-achasi ike. Ma ọ bụ na ọnọdụ okpomọkụ dị n’elu ya dị ogo 482. Ọnọdụ okpomọkụ a na-ebute site na nnukwu mmetụta griin haus nke na-ewepụta ikuku ya dị oke ma sie ike. N'adịghị ka mbara ụwa, nke nwere mmetụta griinụ nke na-enyere aka ịkwalite ọnọdụ okpomọkụ dị mma, ebe a bụ ikwubiga okwu ókè. Ikuku ya niile tọrọ atọ n’ ikuku ya enweghị ike iru mbara. Nke a na-eme ka Venus dị ọkụ karịa Mercury n'agbanyeghị na ọ dị nso na anyanwụ.
Otu ụbọchị na Venus kwekọrọ na ụbọchị 243 n ’ụwa ma ogologo oge karịa afọ ya niile nke na - ewe ụbọchị 225. Nke ahụ bụ, ọ na - ewe ogologo oge iji tụgharịa onwe ya karịa anyanwụ. Otu ihe ikpeazụ anyị chọrọ ịmata bụ na ọ bụrụ na mmadụ ebie ebe a, ha ga-ahụ otu anyanwụ si ada na ọdịda anyanwụ na ọdịda anyanwụ ga-adị n’ọwụwa anyanwụ.
E nwere ọtụtụ echiche nke Satellites nke Venus na mbara igwe. N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na e nwere ọtụtụ ọnwa na mbara igwe, site na ụfọdụ ndị na-enweghị ikuku dị ka ọnwa na ndị ọzọ nwere oke ikuku dị ka Titan, ị pụrụ ịhụ na Venus enweghị Satellites. Anyị maara na Venus na Mercury bụ naanị mbara ala ndị dị na mbara igwe na-enweghị ọnwa ndị na-agba ha gburugburu. Ihe kpatara nke a bụ ihe ọtụtụ ndị ọkà mmụta sayensị n’akụkọ ihe mere eme nile na-achọ.
Ọ bụ ebe a ka ndị na-enyocha mbara igwe na-atụle ụzọ ụfọdụ nwere ike isi kọwaa ihe kpatara mbara ala abụọ ndị a enweghị ọnwa. Nke mbụ bụ na ike nke mbara ala ndị a na - ejide satịlaịtị ndị dị na mbara igwe mgbe ha rutere ha nso. Nke a ga-abụ ikpe nke las obere ọnwa mars amara dị ka Phobos na Deimos. Ihe omuma ozo nke puru ichota bu na mbara ala Venus gha emerie ihe di egwu nke ghapupu akuku ya n'ime uwa. Ihe omuma a gha emeputa satellite, nke bu ihe emere na onwa.
Ihe omuma ndi ozo banyere Satellites nke Venus bu na enwere ike imeputa ya na mbara ala site na imeputa ihe nile nke foduru n'oge nhazi nke Venus. N'ụzọ dị otú a, ọnwa ga-abụ akụkụ nke ụwa dum.
Echiche banyere Satellites nke Venus
N’iburu n'uche ụfọdụ ọgbaghara dị egwu na nke gbara ọkpụrụkpụ gbasara sistemu nke mbụ, anyị ga-amata na e nwere ọtụtụ puku obere ozu ndị na-agagharị n’etiti mbara ụwa dị iche iche. Ọ bụ ebe a ka ndị sayensị chere na anyị enweghị satịlaịtị nkịtị. N'ebe a ajuju ajuju banyere Venus nwere ike inwe ọnwa ugbua. Fọdụ ndị nyocha gosipụtara nyocha ha nwere ike ikwu na ya Venus gaara ata ahụhụ ma ọ dịkarịa ala 2 nnukwu mmetụta site na nnukwu ahụ n’oge gara aga ha mere ọnwa ndị ha ga-apụ n’anya.
O yikarịrị ka ọ ga-abụ na Venus nwere obere ọnwa sitere na mkpofu ndị si na mbara ala pụta mgbe nnukwu mmetụta sitere na nnukwu ahụ. N'ihi ike nke gravitation, satịlaịtị ahụ na-aga ruo mgbe ikike ndọda nke Venus na-emetụtaghị ya. N'ụzọ dị otú a, ọ ga-abụ na mbara ala na-emeri ụfọdụ mmetụta na-esote ma gbanwee ntụgharị ụwa, na-akpata mmetụta ọzọ. Nke a na - akpata mmetụta nke ebili mmiri iji mee ka Satellites pụọ na Venus.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere Satellites nke Venus na enweghị ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Astron » Satellites nke venus
Pesdị ụzarị ọkụ nke anyanwụ